अँध्यारोमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ११, २०७६ गिरि श्रीस मगर
र, लुटिएर सिमानामाबल्लतल्ल घर आइपुगेको मुगलानिया हुँ म ।
घेरेर मलाई उभिएका छन् नानीहरुपिाढीमा राखेको छु मैलो पुरानो झोला ।
नखोल्नुपर्ने नानीहरुले त्यो झोला !
हेर ! हेर !!
निस्केर झोलाबाट कस्तरी फैलिरहेछ अँध्यारो !
कस्तरीे बोलिरहेछ क्रूरताको मौन भाषा
कस्तरी पोतिरहेछ अनुहारहरुमा
र, खाडीबाट आएको
दुस्वप्नजस्तो बाकस हुँ म ।
छोपिएको छु कााडैकााडाको मालाले ।
नखोल्नुपर्ने त्यो बाकस !
निस्केर बाकसबाट कस्तरी फैलिरहेछ अँध्यारो !
कस्तरी फैलिरहेछ हावाको वेगमा
कस्तरी पसिरहेछ आाखामा अश्रुग्यासजस्तै !
र बाउन्न हन्डर, त्रिपन्न ठक्कर खाएर
राजधानीबाट गाउँ फर्केको
बेरोजगार क्लान्त युवा हुँ म ।
सुस्ताउँछु एकै छिन ।
ठोकेर पुर्पुरो आफ्नै
फाल्छु लाऽऽमो एक सुस्केरा !
नफाल्नुपर्ने सुस्केरा त्यसरी !
निस्केर सुस्केराबाट कस्तरी फैलिरहेछ अँध्यारो !
कस्तरी दौडिरहेछ गाउँभरि फैलाएर
दुःखले जस्तै –
कस्तरी छोपिरहेछ डाँडामाथिको घामजून !
र, अर्को ध्रुवमा
भयङ्कर समृतिको सिरक ओढेर सुतिरहेछ समय
तर्साउने तिखा आवाजसहित
रक्ताम्य सडकहरुमा भने
अनवरत चलिरहेछ अँध्यारो को सवारी,
जाममा परिरहेछ कतै क्षितिजपारि !
ओर्लेर पुरातन बग्गीबाट
निचोरिरहेछ उषाकालीन उज्यालो
निर्दोष नानीहरुका ओठबाट !
जिज्ञासु किशोरहरुका आँखाबाट !!
चोरिरहेछ शेष उज्यालो
उत्साही युवाहरुका मनबाट !
अनुभवी प्रौढहरुका मस्तिष्कबाट !!
देखिन्न अँध्यारो मा
ड्रयाकुला शासकको खुनी दाह्रा !
हत्यारा हातको रामपुरी खञ्जर !
बलात्कारी हातको तेजाब र नङ्ग्रा !
साथी र शत्रुको रङ उस्तै लाग्छ
गोमन सर्पको चिल्लो शरीर
र मायालुको कोमल स्पर्श !
दिन र रात एउटै लाग्छ
घर र घाट एउटै लाग्छ ।
अँध्यारो ले हैरान खेलाएको
मुगलानिया हुँ म !
दुस्वप्नजस्तो बाकस पनि मै हुँ !
पुर्पुरो ठोकिरहेको युवा !
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ १०:१९